किसानलाई सस्तो व्याजमा ऋण दिनुु पर्छ - सहकारीखबर
किसानलाई सस्तो व्याजमा ऋण दिनुु पर्छ
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, साना किसान विकास बैंक
साना किसान विकास बैंकको वर्तमान अवस्था कस्तो छ ?
साना किसान विकास बैंक वित्तिय हिसाबले राम्रो छ । बैंकले नाफा कमाएको छ । नियमित लाभाशं बाढेका छौं । कर्मचारीलाई बोनस दिएका छौं । लगानीका साधन स्रोत जुटाएका छौं । नेपाल सरकार संग पनि ऋण लिएर कार्यक्रमहरु संचालन गरीरहेका छौं । ऋण लगानी प्रभावकारी ढंगले चलेको छ । किसानहरुलाई पनि सस्तो व्याजमा ऋण पुग्नु पर्छ भन्ने सोचेका छौं । सरकारले पनि यसमा मद्दत गरीरहेको छ । हामी अहिले ६५ जिल्लामा पुगेका छौं । यसलाई विस्तार गर्ने सोचमा छौं । नेपालका सबै साना किसानमा बैंक पुग्नु पर्छ भन्ने सोचे हो । यस विषयमा हामी अग्रसर छौं ।
साना किसान बैंक र सहकारी कसरी सहकार्य गरीरहनु भएको छ ?
यस विषयमा अलि लामो पृष्ठभूमि रहेको छ । कृषि विकास बैंकले साना किसान विकास आयोजन संचालन गरेको थियो । यो कार्यक्रम संचालन गर्दै गएपछि कृषि विकास बैंकले करिब ६ सय गाविसमा ४ सय ५० भन्दा बढी साना किसान आयोजना संचालन गरेको थियो । बैंकले यस कार्यक्रमलाई सस्टेन गर्न गार्यो भयो । त्यसपछि २०४८ सालमा सहकारी ऐन आयो । २०४९ मा नियमावली आयो । त्यसपछि सहकारीको क्षेत्र फराकीलो भयो । ति साना किसान विकास आयोजनालाई सहकारीमा रुपान्तरण गरीयो । यस्तो घटना विरलै हुन्छ । अन्य मुलुकमा यस्तो हुँदैन । ति आयोजनाबाट २ सय ११ सहकारी संस्था बन्यो । अहिले बैंकले साना किसान सहकारी नयाँ बनाउँदै गएका छौं । ति सहकारीलाई कृषि विकास बैंकले ऋण दिन सम्भव नभएको हुनाले कृषि विकास बैंककै पहलमा साना किसान विकास बैंक स्थापना भएको हो । ति संस्थाहरुको निकायको रुपमा बैंक रहेको छ । साना किसान सहकारीलाई कृषिमा लग्यौ । यस कार्यक्रमलाई अझै बढाएर लैजाने संकेत देखिएको छ । ति आयोजना सहकारीमा रुपान्तरण भएपछि बलीयो रुपमा खडा भएका छन् ।
बैंक संग कती सहकारी संस्था आवद्ध रहेका छन् ?
हामी संग कारोबार गर्ने साना किसान कृषि सहकारी ४ सय ३० वटा भन्दा बढी रहेको छ । देशभर ३ सय ६६ साना किसान सहकारी भएका छन् । १ सय भन्दा बढी सहकारी बन्दैछन् । यो आर्थिक वर्ष भित्रै साना किसान सहकारी मात्रै साढै चार सयको हाराहारीमा हुन्छन् । झण्डै चार लाख घर परिवार हाम्रो बैंकका सदस्य छन् ।
साना किसानलाई सहुलियत व्याज कसरी दिदै हुनुहुन्छ ?
नेपाल सरकारको सहयोगमा साना किसानहरुलाई सहुलीयत रुपमा व्याज दिदै आएका छौं । केही कृषि उत्पादनमा सहुलीयत व्याज दिदै आएका छौं । जस्तैः मासु उत्पादन (पोल्टी र माछा बाहेक)मा सहुलीयतमा दिदै आएका छौं । नेपालमा खसी, बाख्रा, रागाँ, बङ्गुरको प्रचुर सम्भावना छ ।कृषिमा सहुलीयत दिएनौं भने युवा पलायन भएर जान्छ । यि व्यवसाय छाडेर अन्य व्यवसाय खोज्दछन् । यस हिसावले किसानको हातमा ९ प्रतिशत व्याजमा ऋण उपलब्ध गराउँदै आएका छौं । यो आर्थिक वर्ष देखि गाई पालनमा पनि सोही व्याजदरमा ऋण दिएका छौं । सरकारले सहुलीयत दरमा हामीलाई ऋण दिएको छ त्यही ऋण सहकारीबाट साना किसानलाई प्रदान गरेका छौं ।
बैंकले साना किसान सहकारी कसरी निमार्ण गर्दछ ?
साना किसान सहकारी निमार्ण गर्नलाई सरकारको सर्पोट छ । ति सर्पोटलाई खर्च गरेर तालिमका कुराहरु, अनुसरणमा कार्यक्रम, सामुदायिक काम र पशु विमाको काम पनि हामी गर्दछौं । यि कामले बैंकलाई फाइदा हुने त होइन । यि कामहरु बैंक मार्फत किसान समक्ष पुर्याउने काम गर्दै आएका छौं ।
साना किसान सहकारीको विकास र प्रवद्र्धनमा बैंकले के कस्ता काम गर्दै आएको छ ?
बैंकले विभिन्न तालिमहरु दिदै आएका छौं । सहकारीको मुल्य, मान्यता र सिद्धान्त छुट्टै छ । ति सहकारीमा सहकारीको सिद्धान्त पनि लागू हुनु पर्यो । बैंको सिद्धान्त पनि लागू हुनु पर्यो । बचत, ऋण र कारोबार बैंकको सिद्धान्त अनुसार हुने भयो । दुबै निकायको नीति, नियम लागू हुने भयो । सहकारी संचालन गर्नका लागि आवश्यक शिक्षा, तालिम, ज्ञान बैंकले प्रदान गर्दै आएको छ । सहकारी भित्र पनि कसलाई तालिम दिनुहुन्त त ? कसलाई तालिम दिने ? म्यानेजमेन्ट, कर्मचारी, लेखा समिति, ऋण समिति, कार्यसमिति, सदस्यहरु विभिन्न रहेको छ । सबैलाई तालिम दिनु पर्यो । यि तालिम दिने केही स्रोत र साधन आफ्नै संस्थामा रहेको छ । केही स्रोत, साधन बैंकले पनि जुटाएको छ । नियमित रुपमा कार्यसमिति परिवर्तन हुन्छ ।
अन्त बैंक तथा वित्तिय संस्थामा पैसा राख्नु भन्दा सहकारीमा राख्नु फाइदा छ । व्याज यति दिन्छ, यतिमा ऋण पाइन्छ । १५ प्रतिशत सम्म लाभांश दिन्छ । यि सबै साना किसानलाई हामीले सिकाउनु पर्छ । यसका लागि सिकाउने स्रोत, मानिस, ठाँउ र समय चाहिन्छ । सक्दो साधन जुटाएर बैंकले काम गर्दै आएको छ ।
प्रस्तुती : काजी श्रेष्ठ